Maitiro EkuDhawunirodha Mapurogiramu PaApple Tarisa: Iyo Yakazara Nhungamiro! - Apple Tarisa
yangu iphone haizobatanidze kune itunes
maitiro ekuita mafoni uchishandisa wifi pane iphone
ndiani anogadzira iphone 6 skrini
iphone isiri kuchaja kana kuvhura
Maitiro EkuDhawunirodha Mapurogiramu PaApple Tarisa: Iyo Yakazara Nhungamiro!
How Download Apps Apple Watch
Iwe unoda kuisa maapplication pane yako Apple Watch, asi hauna chokwadi kuti sei. Pasina maapplication, yako Apple Watch yakangofanana nechero ipi inofinha, wachi yekare! Muchinyorwa chino, ndicha kukuratidza nzira nhatu dzekutora maapplication pane yako Apple Watch .
Maitiro EkuDhawunirodha Mapurogiramu PaApple Watch
Pane nzira nhatu dzekurodha pasi maapplication pane yako Apple Tarisa muApple app.
unoteedzera sei meseji pane iphone
Kubva pane Inowanikwa Mapurogiramu runyorwa mune Yangu Yekutarisa tebhu.
Kubva kuApple Watch App Store.
Uchishandisa chishandiso cheApple chekutarisa App Store.
Pazasi, ini ndinokufamba iwe kuburikidza neimwe yeidzi nzira nhatu kuti iwe ugone kudzidza kuisa mapurogiramu pane yako Apple Watch.
Maitiro EkuDhawunirodha Apple Tarisa Mapurogiramu Kubva Iyo Yangu Yekutarisa Tab
Vhura iyo Watch app pane yako iPhone.
Tinya iyo Wangu Kutarisa tab uye pfugama pasi ku Zviripo Zvirongwa .
Tinya orenji Isa bhatani kurudyi rweapp iwe waunoda kuisa pane yako Apple Watch.
Diki denderedzwa renzvimbo richaonekwa kukuzivisa iwe kuti iri padyo sei programu iri kuisa pane yako Apple Watch.
Pane yangu Apple Watch, zvinowanzo kutora maminetsi mashoma kuti iyo app ipedze kuisa, saka iva nemoyo murefu!
Maitiro EkuDhawunirodha Apple Tarisa Mapurogiramu MuApp Store
Tinya iyo App Store tab pazasi pekona. Iwe uchazoziva iwe uri muApple Watch App Store kana iyo tabu yashanduka bhuruu.
Bhurawuza uchitenderedza App Store kusvikira wawana iyo app yaunoda kuisa.
Tinya Tora kurudyi kweapp yaunoda kurodha pasi.
Simbisa kurodha pasi uchishandisa passcode yako, Bata ID, kana Chiso ID.
Mushure mekusimbisa kurodha pasi, diki renzvimbo denderedzwa richaonekwa kurudyi kweapp.
Maitiro EkuDhawunirodha Mapurogiramu Ekutarisa App Uchishandisa Iyo Yekushandisa Chishandiso
Vhura iyo Watch app .
Tinya pane iyo Tsvaga tab muzasi-kurudyi kona yekona.
Tinya pabhokisi rekutsvaga.
Nyora muzita reapp yaunoda kuisa pane yako Apple Watch.
Tinya Tsvaga mukona yepazasi-kurudyi kwekhibhodi yako ye iPhone.
Tinya Tora kurudyi kweapp kuti utange kuiisa.
Simbisa iko kurodha pasi neAppcode yako yepasipoti, Bata ID, kana Chiso ID.
Iyo denderedzwa renzvimbo ichaonekwa kukuzivisa iwe kuti zvinotora nguva yakareba sei kuti iyo app iise.
Ndekupi Iko Apple Inotarisa Mapurogiramu Mushure mekunge Atoridzwa?
Paunenge iwe watora pasi iyo app kana maapps pane yako Apple Watch, unogona kuzviona nekuvhura nekutepa iyo Dhijitari Crown (iyo yakatenderera bhatani parutivi rweApple Watch yako). Pano, iwe uchaona menyu neese ako maapplication akaratidzirwa.
Kuti uvhure iyo app yawakangoisa, tinya pairi. Iwo mapikicha eapp anogona kunge akaoma kutora nekuti avo madiki, asi iwe unogona kuswededza mukati nekushandura iyo Dhijitari Korona. Iwe unogona zvakare kutsvedza munwe wako kutenderedza skrini kuti ubatsire kuwana iyo app yauri kutsvaga mushure mekunge waswededza mukati.
Achangobva kurodha maapplication anowanzoonekwa pane kurudyi kurudyi kana kuruboshwe kuruboshwe kwechiso chekutarisa.
Kudhaunirodha maApplication PaApple Tarisa: Yakatsanangurwa!
Iwe ikozvino unoziva zvese zviripo kuziva nezve kurodha pasi maapplication pane yako Apple Watch. Ndinokukurudzira kuti ugovane ichi chinyorwa pasocial media kuti udzidzise mhuri yako neshamwari maitiro ekurodha pasi maapplication paApple Watch yavo zvakare. Ndiudze nezve ako aunofarira Apple Watch maapplication nekusiya chirevo pasi pazasi!
Zvinoreva Chiporofita Kune Muchengeti Wamasuwo
Gadziridza Apple ID marongero pane iPhone? Pano tinotsanangura zvazvinoreva uye zvekuita!
iPhone Kamera Isiri Kushanda? Heino Kugadzirisa!
Ini Ndabvisa iyo App Store, Safari, iTunes, kana iyo Kamera kubva kune yangu iPhone, iPad, kana iPod! (Kwete Iwe Hauna!)
iPhone Keyboard Haisi Kushanda? Heino Chikonzero & Iyo Chaiyo Kugadzirisa!
Mota inobhadharwa mari inogona kudzoserwa kumutengesi here?
Zvinorevei Kana Musikana Akakutarisa Pasina Kunyemwerera?
Mienzaniso Yekutambudzika Kwakareba MuBhaibheri
Nharembozha Dudziro pa iPhone Yakundikana? Heino chikonzero uye mhinduro!
Yangu Apple Tarisa Inongoratidzira Iyo Nguva chete! Heino Chaicho Kugadzirisa.
Ndimi rudo rwehupenyu hwangu
Inogona here iOS 12 Kuyera Zvinhu? Ehe! Heino Maitiro Ekuzviita.
How To Turn On iPhone: Iyo Inokurumidza & Nyore Gwara!
Nei Kune Nyenyedzi Mune Meseji App Pane yangu iPhone?
iPhone Haisi Kuita Kufona? Heino Nei & Iyo Gadzira!
Doro rako rine shuga yakawanda zvakadii?
Marii kupenda mota?
Nei Yangu iPhone Mapurogiramu Achiramba Achirovera? Heino Kugadzirisa.